देशभर कहाँ-कहाँ कतिले गरे उम्मेदवारी दर्ता ? यस्तो छ ताजा (अपडेट) — Imandarmedia.com
देशभर कहाँ-कहाँ कतिले गरे उम्मेदवारी दर्ता ? यस्तो छ ताजा (अपडेट)
काठमाडौं। यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदमा हालसम्म ६० हजार ९५० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार साँझ छ बजेसम्म विभिन्न पदमा उक्त उम्मेदवारी परेको हो।
आयोगले आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ताको लागि समय दिएको थियो। मनोनयन सोमबार बेलुकी पाँच बजेसम्म गर्न पाइनेछ।आयोगका अनुसार हालसम्म प्रमुख पदमा १ हजार ९१४, अध्यक्ष पदमा १ हजार ९४४, जनाले म्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
उपप्रमुख पदमा १ अजार १७३, उपाध्यक्ष पदमा १ हजार ३१९, वडा अध्यक्ष पदमा १५ हजार २८५, महिला सदस्य पदमा ९ हजार ८९१, दलित महिला सदस्य पदमा ८ हजार ६९४ र सदस्य पदमा २० हजार ७३० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
भर्खरै प्राप्त समाचारमा जनाइए अनुसार यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदमा हालसम्म ७१ हजार २३७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार साँझ ७ः३० बजेसम्म विभिन्न पदमा उक्त उम्मेदवारी परेको हो।
आयोगले आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ताको लागि समय दिएको थियो । आयोगका अनुसार हालसम्म प्रमुख पदमा २ हजार ११८, अध्यक्ष पदमा २ हजार २२१, उपप्रमुख पदमा १ अजार ३१८, उपाध्यक्ष पदमा १ हजार ५४४, वडा अध्यक्ष पदमा १७ हजार ७०१, महिला सदस्य पदमा ११ हजार ६५५, दलित महिला सदस्य पदमा १० हजार ३७१ र सदस्य पदमा २४ हजार ३०९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
नेकपा एमालेबाट पोखरा महानगरपालिकाको मेयरका आकांक्षी दीपक पौडेलले पार्टीभित्रका केही षड्यन्त्रकारीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भ्रममा पारेर आफूलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार फेसबुकमार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले आफूले कामको श्रेष्ठताका आधारमा मेयरको उम्मेदवार चयन भए पनि आफ्नै पार्टीका केही षड्यन्त्रकारीले दूराग्रह राखेर चरित्र हत्या गर्न खोजेको बताए ।
पौडेलले पोखराको एक सुन पसलबाट सुनको सिक्री चोरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
पौडेलले उक्त भिडियो झुटो भएको बताए । केही आफ्नै पार्टीका षड्यन्त्रकारी तत्वहरुले दुराग्रह भावना राखी चार वर्ष अगाडिको झुट सम्पादित भिडियो बनाई चरित्र हत्या गर्न खोजे । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भ्रममा पार्ने दुस्प्रयास गरे, उनले भनेका छन्।
उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि एमालेले पोखरामा पौडेलको सट्टा कृष्ण थापालाई मेयरको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार थापाले मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन् ।
पौडेलले आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्। मेरो बारेमा आएका केही भ्रमपुर्ण समाचार सर्वथा झुट रहेको व्यहोरा सबै जनसमुदाय समक्ष प्रकट गर्दछु । यदि कुनै कमीकमजोरी भए पार्टी तथा सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गर्न अपिल गर्दछु, उनले भने।
पौडेलले आफू पार्टीको इमान्दार सिपाही भएको हुँदा पार्टीले गर्ने जुनसुकै निर्णय शिरोपर गर्ने बताएका छन्। उनले पार्टीको सचिवालय बैठकले आफूलाई मेयरको उम्मेदवार तोकिसकेपछि अप्रत्यासित निर्णय आएको भन्दै त्यसविरुद्ध पार्टी कमिटीमा बहस गर्ने बताएका छन्।
मैले पद पाउन भनेर अर्कालाई होच्याउने कार्य कहिल्यै गरिन, अर्कालाई मिथ्या आरोप लगाएर पदको लागि मरिहत्ते गर्ने हर्कतविरुध्द म जीवनभर संघर्ष गरिरहनेछु, उनले भनेका छन्।